Maxaa ka taqaan maal-qabeennada adduunka ugu da’da yar | Xarshinonline News
Maxaa ka taqaan maal-qabeennada adduunka ugu da’da yar
Waxa ay ahayd laba todobaad ka hor markii ay jariiradda Forbes ee ka soo baxda waddanka Maraykanka ay shaacisay ragga adduunka ugu maal-qabeensan taas oo ay ku sheegtay in kaalinta 1aad uu sannadkan galay ninka u dhashay waddanka Mexico ee Carlos Slim oo haysta 53.3 kaas oo booska ka riixday ninkii hore u haystay ee Bill Gates oo u dhashay Maraykanka. Haddaba, waxa halkan aanu ku soo bandhigaynaa Mustaqbalka shakhsiyaadka da’yar ee laga yaabo inay beddelaan. Kuwan ayaa ah tobanka ugu da’da yar maal-qabeennada adduunka kuwaas oo liiskooda la soo saaray sanadkan 2010-ka. Waa kuwan tobanka qof magacyadooda, dalalka ay u dhasheen iyo xaddiga lacagta ah ee ay haystaan iyo nooca ganacsigooda.
1. Mark Zuckerberg: Waa 25 sano jir u dhashay dalka Maraykanka waxaana uu haystaa lacag dhan 4 Bilyan (1000 milyan) oo Dollarka Maraykanka ah. Ninkan da’da yari waa aasaasaha iska leh barta Internetka ee Facebook. Waxa uu sameeyey bartan sannadkii 2004 isaga oo ku jira jaamacadda Harvard ee waddanka Maraykanka, waxaanu ahaa Thesis-kii qalin-jabinta Jaamacada.
2. John Arnold: Waxa uu haystaa sidoo kale 4 bilyan oo Dollar, da’diisuna waa 36-jir u dhashay Marykanak. Waxa kiraysatay shirkadda Enron ee tamarta ka dib markii ay shirkaddaasi kacdayna waxa uu iskii u aasaasay sannadkii 2002 shirkadda Centaurus Energy.
3. Yang Huiyan: Waa Haweenay u dhalatay dalka Shiinaha, da’deeduna 28-jir waxaanay haystaa xaddi lacageed oo dhan 3.4 Bilyan. Gabadhani waxa ay hantida ka dhaxashay aabaheed oo ah maal-gashade kaas oo ka hor intii aanu hawl-gabin iyada ku wareejiyey.
4. Albert von Thurn und Taxis: Waa maal-qabeen da’ yar oo u dhashay waddanka Jarmalka. Ninkan oo ah 26-jir waxa lacagtiisa lagu qiyaasaa 2.2 bilayn oo Dollar. Ninkan laftigiisu waxa uu hantida ku helay dhaxal. Waxa uu dhaxalka kula wareegay munaasibadda dhalashadiisa 18aad.
5. Fahd Hariri: Waa 29 sano jir u dhashay Lubnaan waxaana uu haystaa lacag gaaraysa 1.4 Bilyan oo Doolar Ameerikaanka ah. Ninkan oo ah ka ugu da’da yar wiilasha uu dhalay raysalwasaarihii Lubnaan ee la dilay, waxa uu dhaxlay hantida aabihii oo ahayd shirkado dhisme iyo qaar is-gaadhsiineed.
6. Aymin Hariri: waxaa Sacuudiyaan Haysta 1.4 Bilyan oo Doolar waxaana uu jiraa 31 sano. Ninkani laftigiisu waxa uu ka mid yahay wiilashada uu dhalay Rafiiq, balse waxa uu haystaa dhalasho Sucuudi ah, waxaanu qayb ka qaatay hantidii aabihii.
7. Yoshikazu Tanaka: waxaa uu u dhashay dalka Japan waana 33 sano jir haysta 1.4 Bilyan oo Doolar. Sida ninka liiskan ugu horeeya, Tanaka waxa uu laftigiisu hantida ka helay isaga oo samaystay bar internetka ah oo sida Facebook dadku ku xidhiidhaan kaas oo la yidhaahdo Gree.
8. Kostyantin Zhevago: Waa 36 jir gacantiisa ay ku jirto 1.2 Bilyan oo Dollar waxaana uu u dhashay waddanka Ukraine. Waxa uu saami badan ku leeyahay shirkadda birta dhalaalisa ee Forrexpo iyo bangi lacagaha xawila
9. Lee Ziaohui: waa 28-sano jir u dhashay dalka Shiinaha waxaana haatan gacantiisa ku jira 1 Bilyan oo Doolar. Waa guddoomiyaha mid ka mid ah shirkadaha birta soo saara ee Shiina ee layidhaahdo Shanxi Haixin Iron and Steel Group taas oo uu dhaxlay ka dib markiii aabihii toogasho lagu dilay sannadkii 2003
10. Shahid Balwa: oo ah 36-jir u dhashay dalka Hindiya waxa uu haystaa hanti dhan 1 Bilyan oo Doolar. Waxa ay nin kale wada leeyihiin shirkadda DB Realty oo baabuurta samaysa iyo sidoo kale hudheelka 108ka dabaq ah ee Park Hyatt oo ku yaala magaalada Mumbai ee dalka Hindiya
← Umaddu waxay xukuumadda uga fadhiyaan in xuquuqdooda ay helaan
Rabaso: Jabhadda ONLF oo laysay dhalinyaro reer Somaliland ah →